मोटरसाईकल दुर्घटनामा १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु ।
Today:Mon, Apr 23, 2018
कपिलवस्तु फागुन ६ ।
कपिलवस्तुमा आज दिउसो भएको मोटरसाईकल दुर्घटनामा १ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भिर घाइते भएका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत कपिलवस्तुको जीतपुर गोरुसिंगे खण्डको बलहुन्द्रा खोला नजिक मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी धनगढि उपमहानगरपालिका ५ हसनपुरका ३४ वर्षीय डेबिट सिंहको घटना स्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाण्डौबाट धनगढि जादै गरेको बा.१७ प. ५८४५ नम्बरको मोटरसाइकल र सोही दिशातर्फ जादै गरेको रा.१ ख. ८२८ नम्बरको टिप्परसंग ठक्कर खादा मोटरसाईकल दुर्घटना परेको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकलमा सवार घाइते खेमराज सिंहको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भएको छ ।
यसैबीच गएराती पुर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत कपिलवस्तुको शिवपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको खिदिम गाविस ९ का १९ वर्षीय महेश सुनार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ ।